Sida loo isticmaalo SEO ee website-kayga korniinka hore?
Waxay timaaddaa iyada oo aan sheegin in ay noqon karto hawl adag oo lagu bilaabi karo si wanaagsan oo leh bog cusub oo la bilaabay. Inta badan, ku dhawaad ​​ganacsade kasta oo online-ka ah ayaa wajahaya arrintan oo sahlan, laakiin su'aal dhab ah oo muhiim ah. Weli kuwa weli walaacsan "Sida loo isticmaalo SEO ee shabakadayda horumarinta hore?" halkan waa liis gaaban oo xeelad-si-habboon oo ku-habboon u-habboon in la helo jaan toos ah oo loogu talagalay wax-qabadka guud ee boggaga internetka, gaar ahaan iyada oo la adeegsanayo xilliyadii hore ee bilowga - setup vps windows 7.
Ka hor intaanaan bilaabin, ka dib talaabooyinkani waxay kaa caawin doonaan inaad dhisayso aasaas adag ee website-kaaga si aad u hesho gaadiidka. Kaliya hal shay oo aad xasuusato - marka ay timaado SEO, waa inaad noqotaa mid joogto ah iyo bukaanka. Marna ha isticmaalin farsamooyin shadiic ah ama tallaabooyinka wax-qabadka si wax looga qabto wax walba, xitaa inkastoo ay si ballaaran uga wada hadlaan Web-ka. Aynu ku qiranno: Abaabul kasta oo degdeg ah maaha mid u qalma in la qaado khatar aad u culus oo lagu qabto ciqaabta Google iyo in lumiyo horumarka laga gaaray shaqo adag. Ka dib oo dhan, halkan waa xariiqda hoose. Haa, samaynta SEO sax ah ayaa kaa qaadan doona waqti badan, waa inaan qiraa. Laakiin haddii aad u socotid wadada saxda ah, dadaal kasta oo aad adigu iska bixinayso si sax ah.
Sida loo isticmaalo SEO ee boggeyga asaasiga ah ee muhiimka ah ee darajo sare leh?
Hubi isticmaalka boggaga internetka. Xaqiiji in bogaggaaga boggaga ay ku martiqaadaan martidaada faraxsan, u hubi in ay isticmaalaan boggaga internetka, iyo macluumaadka qiimaha leh ee sahlan. Is-tijaabi naftaada, ka eeg aragtida macmiilka. Hayso sawir labadaba si aad u ogaatid arin kasta oo la arki karo sida bogag isku dhafan ama jidad khalad ah oo laga yaabo in ay keenaan qaybaha ugu muhiimsan, sida bogagga shabakadda si aad u hesho jawaab celin, iibsasho, ama xaqiijinta amarka. Iska hubi inaad koonto jeeg ka noqotid, ugu yaraan jihooyinka ugu caansan ee soo socda si aad uga takhalustid talaabo kasta oo aan loo baahnayn iyo guji dheeraad ah oo laga yaabo in ay dhib ku noqoto macaamiishaada mustaqbalka.
U imtixaan xawaaraha. Xawaaraha xawaaraha boggaaga waa arrin muhiim ah, labadaba dhinaca mashiinnada raadinta (Xusuusnow, Google marnaba ma siin doono darajooyin sare si ay si tartiib ah uga jawaabaan bogagga shabakadda, iyadoon loo eegin guryaha kale), waxaad ahayd booqde dhab ah - intee in le'eg ayaad rabtaa inaad sugto dhowr ilbiriqsi illaa bogga si buuxda loo soo bandhigo? Ama miyuu noqon karaa mid aad u dhib badan, in aad ka boodi lahayd meel kale?. Waxaan kugula talinayaa in aad eegto xawaaraha xawaaraha boggaaga, tusaale ahaan, qalab PageSpeed ​​Google. Tijaabi boggaaga oo sii wanaajiya kuwa xawaare ka dhigaya in ka yar 90. Haddii ay sidaas dhacdo, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso qaab-celin kasta oo suurtagal ah, sida isku-dhejinta waxyaabaha muuqaalka ah ama dib-u-eegis ku samaynta qoraalada. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, haddii ay wax walba u muuqdaan kuwo si wacan ufilan, laakiin aad weli walaacsan tahay - sida loo isticmaalo SEO ee boggayaga internetka ee xawaareynta xawaareynta - si fiican u hirgaliya horumariye websaydh, ugu yaraan si aad u dirto isku xirka warbixinta xawaaraha iyo qaar fikradaha degdegga ah ee farsamo-hagaajinta ee khabiirka.
Ugu dambeyntii, hubi boggaga internetka si aad ufilisho fiican iyo khibrad user-saaxiibtinimo ah oo laga yaabo inay suurtagal tahay qalab sida miisaaniyadeed asalka ah, iyo qalabyada qalabaysan ee loo adeegsado, sida kiniinnada iyo taleefannada casriga ah. Xusuusnow, iyada oo in ka badan 54% la wadaagayo wacyigelinta raadinta mobile wuxuu mar hore noqday qayb muhiim ah. Sidaa darteed waa inaad wax walba iska ilaalisaa. Anigana, waxaan ku talinayaa in aan eego boggagaaga xiriir kasta oo jabsan marka hore iyo ugu horreyn, sida ay ku yaqaanaan sababaha ugu badan ee halkan.